122 voan'ny Coronavirus Misy olona iray marary mafy
Ady amin’ny Covid 19 Nanolotra 1,2 tapitrisa dolara ny Japoney
Nanolotra 1,2 tapitrisa dolara ny Governemanta Japoneyhanampiana ny ady atao amin’ny covid-19 eto Madagasikara.
Lehilahy iray 75 taona monina eny Sonierana Antananarivo no voamarina fa tratry ny coronavirus omaly, ka nampiakatra ny isa ho 122, hoy ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Niampy 3 kosa ireo sitrana, ka 61 ny fitambarany, ary 61 ihany koa no mbola tsaboina. Ny zava-baovao ihany koa dia misy olona iray ao anatina tsy fahasalamana sy fahasahirana na ilay antsoina hoe "cas grave" raha ny tatitra omaly.Tafiditra ao anatin'ireo olona sokajiana ho marefo izy ity raha ny tatitra ary efa miezaka mikarakara sy mitsabo azy ny dokotera.
Efa tena miparitaka ny eny amin’ny fiarahamonina ny coronavirus. Misy indray ny tranga vaovao izay hanairana ny rehetra tsy ho varimbariana, hoy io Profesora io. Fanontaniana manitikitika ny maro ny hoe: samihafa ve ny endriky ny coronavirus any ivelany izay be maty be sy ny eto amintsika? Ny vokatry ny fikarohana nataon’ireo mpitsabo sy manam-pahaizana dia nahazoana tsoa-kevitra samihafa. Ny faramparany dia hoe miova in-droa na in-telo isam-bolana ity tsimokaretina ity. Miovaova toetra mety masiaka na antonontonony. Tena mora mifindra ary rehefa tafiditra amin’ny vantana, dia tena fetsifetsy satria efa hitan’ny fikarohana fa tsy makany amin’ny avokavoka mamotika ny sela ihany fa makany amin’ny atidoha, fo, taovam-pandevonan-kanina, tsinay,… Miovaova io, ka izany no tena hanamafisana ny fitandremana ho an’ny rehetra, indrindra ho an’ny sokajin’olona marefo. Ny tsoa-kevitra tamina marary an-tapitrisany, dia ireo mihoatra ny 70 taona no sokajiana ho marefo, ireo olona vaventy dia efa voaporofo fa matetika alefa any amin’ny fameloman’aina, eo ihany koa ny voan’ny diabeta indrindra fa mikorontana io, ireo olona misy fahasemporana,… Ireo voatery mifanerasera amin’ny olona maro toy ny mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana, mpivarotra,… Tsy mifidy saranga io, tsy mifidy taona, ary teto amintsika dia tratra avokoa ny sokajin-taona, ka mila mailo sy mitandrina hatrany.